Software များ | | OS ကို-STORE ဘလော့ခ် - အပိုင်း 2
ဇန္နဝါရီလ 20, 2015 မောင်းသူ 0
ယခုနှစ် OS ကို-STORE ကြီးတွေပြန်အဆုံး, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်အဟောင်းဖောက်သည်ကျေးဇူးတင်နိုင်ရန်အတွက်, ကုမ္ပဏီ BlackBerry ကို၏စျေးနှုန်းများကိုဖြတ် 9780 မိုဘိုင်းဖုန်းမှ (အနက်ရောင်). အဆိုပါအဖြစ်အပျက်သည်ယနေ့စတင်, ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများနောက်ဆုံးအနေဖြင့်, ပထမဦးဆုံးအ-တာဝန်ထမ်းဆောင် ... ဆက်ဖတ်ရန် | ယခု Share!
ဇန္နဝါရီလ 15, 2015 မောင်းသူ 1
ယခုနှစ် OS ကို-STORE ကြီးတွေပြန်အဆုံး, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်အဟောင်းဖောက်သည်ကျေးဇူးတင်နိုင်ရန်အတွက်, the company cut prices of some existing Motorola processing. အဆိုပါအဖြစ်အပျက်သည်ယနေ့စတင်, ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများနောက်ဆုံးအနေဖြင့်, ပထမဦးဆုံးအ-တာဝန်ထမ်းဆောင်အခြေခံ. အကျဉ်းချုပ်: 70%... ဆက်ဖတ်ရန် | ယခု Share!
ဇန္နဝါရီလ 15, 2015 မောင်းသူ 0
ယခုနှစ် OS ကို-STORE ကြီးတွေပြန်အဆုံး, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်အဟောင်းဖောက်သည်ကျေးဇူးတင်နိုင်ရန်အတွက်, the company cut prices of some existing BlackBerry processing. အဆိုပါအဖြစ်အပျက်သည်ယနေ့စတင်, ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများနောက်ဆုံးအနေဖြင့်, ပထမဦးဆုံးအ-တာဝန်ထမ်းဆောင်အခြေခံ. အကျဉ်းချုပ်: 70%... ဆက်ဖတ်ရန် | ယခု Share!
AverMedia A321 တီဗီဖမ်းစက် Mini ကို PCIe ကဒ်ကို Windows ယာဉ်မောင်း dowload
မတ်လ 13, 2014 admin ရဲ့ 0
အဆုံး-ဖောက်သည်များအတွက်အကြံပြု. Includes download options for driver-only and driver-with AverMedia saftware. device ကိုမော်ဒယ်: AverMedia A321 TV Software dowload click here. ဗားရှင်း: ပြည်သူ့ ရည်ရွယ်ချက်: Thisi Software... ဆက်ဖတ်ရန် | ယခု Share!
AverMedia A317 တီဗီဖမ်းစက် Mini ကို PCIe ကဒ်ကို Windows ယာဉ်မောင်း dowload
အဆုံး-ဖောက်သည်များအတွက်အကြံပြု. Includes download options for driver-only and driver-with AverMedia saftware. device ကိုမော်ဒယ်: AverMedia A317 TV Software dowload click here. ဗားရှင်း: ပြည်သူ့ ရည်ရွယ်ချက်: Thisi Software... ဆက်ဖတ်ရန် | ယခု Share!
AverMedia A316 တီဗီဖမ်းစက် Mini ကို PCIe ကဒ်ကို Windows ယာဉ်မောင်း dowload
အဆုံး-ဖောက်သည်များအတွက်အကြံပြု. Includes download options for driver-only and driver-with AverMedia saftware. device ကိုမော်ဒယ်: AverMedia A316 TV Software dowload click here. ဗားရှင်း: ပြည်သူ့ ရည်ရွယ်ချက်: Thisi Software... ဆက်ဖတ်ရန် | ယခု Share!
processor ​​ကို Samsung က Nokia က device ကိုမော်ဒယ် ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု မိုဘိုင်းဖုန်း စီပီယူ ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် HTC က 64-နည်းနည်းက Windows OS ကို-STORE Technology_Internet HD Graphics စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု ဥပဒေရေးရာအနက် ပရိုဆက်ဆာ နည်းပညာ Intel က Software များ စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ
HTC က Technology_Internet Intel က Server ကို စီပီယူ device ကိုမော်ဒယ် Samsung က 64-နည်းနည်းက Windows HD Graphics ပရိုဆက်ဆာ စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ OS ကို-STORE စမတ်ဖုန်းများ ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် မိုဘိုင်းဖုန်း နည်းပညာ ဥပဒေရေးရာအနက် Samsung ရဲ့ Galaxy စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု Sony Ericsson က ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု processor ​​ကို Qualcomm မှ Intel က Nokia က Software များ